Imigaqo neMiqathango | Uhlobo Rave
Indawo yeWebhusayithi kunye neMiqathango yeSicelo kunye neMiqathango yokuSetyenziswa
Ukusetyenziswa kwewebhusayithi yeStayile Rave okanye isicelo osinikezwe yiStayile Rave okanye enye yezixhaso zayo, kunye nawo nawuphi na umxholo, ukusebenza okanye ukusebenza okwenziwa kwiWebhusayithi, kubandakanya nayiphi na imixholwana engaphantsi kwayo, okanye usetyenziso (“iWebhu sayithi”) ilawulwa ngokwale mibandela nale meko ilandelayo. I-ststrarave.com yenziwa ifumaneke ngoDidi Rave okanye abaxhasi bayo (“thina” okanye “thina” okanye “bethu”), ngamnye kubo amkele le miGaqo kunye neMeko ngokubhekisele kwiwebhu yayo. Sinokutshintsha iMigaqo kunye neMeko amaxesha ngamaxesha, nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso kuwe, ngokuthumela utshintsho olunjalo kwiwebhusayithi. NGOKUSETYENZISELWA STYLERAVE.COM, UFUMANEKA KANYE NGOKUFANELE KWEZI NGXELO NOKUKHANYA NJENGOKO KUFUNYANELWE ekusebenziseni kwakho STYLERAVE.COM. Ukuba awuvumelani nale Migaqo kunye neMeko, unokungafikeleli okanye usebenzise enye i-www.stylerave.com.
Njengaphakathi kwakho kunye nathi, yonke impahla okanye umxholo ofunyenwe kule sayithi ngokukodwa kwaye yenzelwe iSitayile Rave okanye iqela elinike umxholo kwiSitayile Rave igcina konke okulungile, isihloko, kunye nomdla kumxholo. Ukusebenzisa kwakho i-www.stylerave.com akukunikezeli ukuba ungumnini wawo nawuphi na umxholo, ikhowudi, idatha okanye izixhobo onokufikelela kuzo okanye ungene ku-www.stylerave.com. Ngokuhambelana, umxholo awunakukopishwa, usasazwe, upapashwe kwakhona, ulayishwe, uthunyelwe, okanye ugqithiselwe nangayiphi na indlela ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yeSitayile Rave. Ngokwenza njalo, awunakususa okanye uguqule, okanye uncede ukuba ususwe okanye uguquke, nakuphi na ilungelo lokushicilela, uphawu lwentengiso, igama lokurhweba, uphawu lwenkonzo, okanye nasiphi na esinye isaziso sokungena okanye into ebonakala kuyo nayiphi na imixholo. Ukuvelisa kwakhona okanye ukuSebenzisa umxholo ngaphandle kokuba kuchazwe ngokucacileyo kule Migaqo yokuSetyenziswa kuphula isitayile seRave kwaye kunqatshelwe ngaphandle kwesaziso selungelo lokushicilela, eliyinxalenye yale mibandela.
Unokufikelela kwaye ujonge umxholo kwiwebhusayithi ethi: www.stylerave.com kwikhompyuter yakho okanye kwenye isixhobo kwaye, ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela kule Migaqo neMiqathango okanye kwiwebhusayithi ethi www.stylerave.com, yenza ikopi enye okanye iiprinta zesiqulatho esikwi-Intanethi. com yeyakho, eyangaphakathi sebenzisa kuphela. Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela kule Migaqo neMiqathango okanye kwiwebhusayithi ethi www.stylerave.com, ukusetyenziswa kwe-www.stylerave.com kunye neenkonzo ezinikwa kwi- okanye kwi-wstylerave.com, zenzelwe wena kwaye azisebenzisi iinjongo zorhwebo kuphela.
Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela kule Migaqo nakwiMeko okanye kwi-www.stylerave.com, nakuphi na ukusasaza ukuthengisa okanye ukuthengisa, ukupapasha okanye ukuxhaphaza i-www.stylerave.com, okanye nakuphi na umxholo, ikhowudi, idatha okanye izinto ezikwi-www.stylerave.com, ngu kungavunyelwe ngokungqongqo ngaphandle kokuba ufumene imvume ebhaliweyo ebhaliweyo evela kubasebenzi bethu egunyazisiweyo okanye komnye umnini wamalungelo. Ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngokucacileyo apha okanye kwiwebhusayithi ethi, www.stylerave.com, awunakho ukukhuphela, ukuthumela, ukubonisa, ukushicilela, ukukhupha, ukusasaza, ukuhambisa, ukuguqula, ukwenza, ukusasaza, ukuhambisa, ukwenza imisebenzi yokufumana evela, ukuthengisa okanye ukuxhaphaza ngenye indlela. nawuphi na umxholo, ikhowudi, idatha okanye izinto ezikwi-intanethi okanye ezifumaneka kwi-www.stylerave.com. Ukongeza, uyavuma ukuba awunakutshintsha, uhlele, ucime, ucime, okanye utshintshe intsingiselo okanye ukubonakala, okanye ukuphindaphinda, nakuphi na umxholo, ikhowudi, idatha, okanye ezinye izinto ezikhoyo okanye ezifumaneka nge www.stylerave.com, kubandakanya , ngaphandle kokuthintelwa, ukutshintsha okanye ukususwa kwayo nayiphi na uphawu lwentengiso, amagama orhwebo, iilogo, amanqaku enkonzo, okanye nawuphi na umxholo wobunini okanye izaziso zamalungelo obunini babanini. Uyavuma ukuba awufumani nawaphi na amalungelo obunini ngokukhuphela okanye usebenzise nayiphi na into enamalungelo okushicilela kwi-Intanethi okanye kwiwebhusayithi ethi.stylerave.com. Ukuba usebenzisa enye i-www.stylerave.com, okanye umxholo, ikhowudi, idatha okanye izixhobo ezikhoyo okanye ezifumaneka kwi-www.stylerave.com, ngaphandle kokuba kunikwe ngenye indlela ngasentla, unokwaphula ilungelo lobunini neminye imithetho yaseMelika, amazwe, kunye nemithetho esebenzayo yelizwe kwaye inokuba phantsi koxanduva lokusetyenziswa okungagunyaziswanga.
Iimpawu zophawu, iilogo, amanqaku enkonzo kunye namagama orhwebo (ngokudibeneyo "uphawu lwentengiso") eboniswe kwi-www.stylerave.com okanye kumxholo ofumaneka kwi-www.stylerave.com zizimpawu zethu ezibhalisiweyo nezingabhaliswanga kunye nezinye kwaye azinakusetyenziswa ngokunxulumana iimveliso kunye / okanye iinkonzo ezingahambelani, nezinxulumene, okanye ezixhaswe ngabanini bamalungelo abanokubangela ukuphazamiseka kwabathengi, okanye ngayo nayiphi na indlela enxaxha nabanamalungelo abo. Zonke ii-Trademark ezingezizo ezethu zivela ku-www.stylerave.com okanye kwiinkonzo zewebhusayithi, ukuba zikhona, ziyipropathi yabanini bazo. Akukho nto iqulethwe kwi-www.stylerave.com kufuneka ithathwe njengokubonelela, ngokubeka, i-estoppel, okanye ngenye indlela, naliphi na iphepha-mvume okanye ilungelo lokusebenzisa nayiphi na iTrackark eboniswe kwi-www.stylerave.com ngaphandle kwemvume ebhaliweyo okanye umntu wesithathu onokuba nelungelo lokuthengisa uphawu . Ukusetyenziswa gwenxa kwakho kweempawu zophawu olubonakalisiweyo ku-www.stylerave.com okanye kwi okanye nakwezinye iinkonzo zewebhusayithi akuvumelekanga kwaphela.
Ngelixa lokusebenzisa kwakho kwewebhusayithi ethi www.stylerave.com kunye / okanye iinkonzo zenziwe zifumaneke kwi- /stylerave.com, unokucelwa ukuba usinike ulwazi oluthile lomntu (olo lwazi luchazwe ngaphambili njenge "Ulwazi loMsebenzisi") ). Ukuqokelelwa kolwazi lwethu kunye nokusebenzisa imigaqo-nkqubo ngokubhekiselele kubumfihlo bolo Lwazi loMsebenzisi luchazwe kwiwebhusayithi umthetho wabucala oku kufakwe apha ekubhekiswa kuzo zonke iinjongo. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba unoxanduva kuphela lokuchaneka kunye nomxholo woLwazi loMsebenzisi.
Ngaphandle kokuba kucelwe ngokungqalileyo, asiceli ndawo kwaye asinqweneli kufumana naluphi na ulwazi oluyimfihlo, olufihlakeleyo okanye lobunikazi okanye ezinye izinto ezivela kuwe ngokusebenzisa i-www.stylerave.com nge-imeyile okanye nangayiphi na enye indlela. Nalo naluphi na ulwazi, imisebenzi yokudala, iidemos, izimvo, iingcebiso, iikhonsepthi, iindlela, iinkqubo, uyilo, iiplani, ubuchule okanye ezinye izinto ezingeniswe okanye ezithunyelwe kuthi (kubandakanya, umzekelo kunye nomda, ongenisa okanye usithumela kumagumbi ethu okuncokola , iibhodi zemiyalezo, iimpendulo zophando, kunye / okanye iibhlog zethu, okanye uthumele kuthi nge-imeyile) ("Izinto ezingenisiweyo") ziya kuthathwa njengezingeyimfihlo okanye ziyimfihlo, kwaye zinokusetyenziswa kuthi nangayiphi na indlela engqinelana ne iwebhusayithi umthetho wabucala. Ngokuthumela okanye ukuthumela izinto ezihanjisiweyo kuthi,: (i) umele kwaye uvume ukuba iiNcwadi eziThunyelweyo zivela kuwe, ukuba akukho mntu wumbi unamalungelo kuzo, nokuba naliphi na “amalungelo okuziphatha” kwizixhobo ezingenisiweyo sele zikhutshiwe, kwaye (ii) usinika thina kunye nabo sinxulumana nabo ngaphandle kobukhosi, ngaphandle kokuthintelwa, kwihlabathi liphela, elingaguqukiyo, elingakhethiyo kwaye linakho ukugqithiselwa ngokupheleleyo, linokunikwa kwaye linelungelo lokusebenzisa kunye nelayisensi yokusebenzisa, ikopi, ukuvelisa, ukuguqula, ukulungisa, ukuguqula, ukuguqula, Dala imisebenzi evela, usasaze, wenze, ubonise kwaye ubandakanye neminye imisebenzi eNgenisiweyo (iphelele okanye inxalenye) ngayo nayiphi na indlela, imidiya, okanye itekhnoloji ngoku eyaziwayo okanye eyaphuhliswayo kamva, kubandakanya ukuthengisa kunye / okanye ukuthengisa. Asinakuba noxanduva lokugcina nayiphi na iMpahla eNgenisiweyo osinike yona, kwaye sinokuthi siyicime okanye siyitshabalalise nayiphi na into enjalo engenisiweyo nangaliphi na ixesha.
Ukuziphatha okungavunyelwe komsebenzisi.
Uyavuma kwaye uyavuma ukuba, xa usebenzisa i-www.stylerave.com kunye neenkonzo ezahlukeneyo, imisebenzi kunye nokusebenza okunikezelwa kwi okanye kwiwebhusayithi ethi.stylerave.com, aniyi: (a) kumenza umntu ongenguye okanye umntu okanye iqumrhu okanye nenze into engeyiyo ubudlelwane bakho nabanye. umntu okanye iziko; (b) faka eyakho okanye yentengiso yeqela lesithathu, uphawu okanye nantoni na ethengisayo kuyo nayiphi na imixholo yewebhusayithi, izinto okanye iinkonzo (umzekelo, ngaphandle kokuthintelwa, kwividiyo encinci (njengoko kuchaziwe apha), ukutya kwe-RSS okanye ipodcast efunyenweyo. kuthi okanye ngenye indlela ngokusebenzisa i-www.stylerave.com), okanye, ngaphandle kokuba kugunyaziswe ngenye indlela kule Migaqo neMiqathango okanye ngokusebenzisa www.stylerave.com ukusebenzisa, ukusasaza ngokutsha, ukuphinda upapashe okanye ukuxhaphaza loo mxholo okanye inkonzo ngayo nayiphi na iinjongo zentengiso okanye zentengiso; okanye (c) ukuzama ukufikelela ngokungekho mthethweni kwezinye iinkqubo zekhompyuter ngokusebenzisa www.stylerave.com. Uyavuma kwakhona ukuba awuzukuzama (okanye ukhuthaze okanye uxhase inzame yomnye umntu) yokuphambukisa, ukubuyisela injineli kwakhona, ukurhoxisa, okanye kungenjalo ukutshintsha okanye ukuphazamisa i-www.stylerave.com okanye iinkonzo zewebhusayithi, okanye nawuphi na umxholo wayo, okanye wenze nayiphi na into engagunyaziswanga. ukusetyenziswa kwayo. Uyavuma ukuba awuzukusebenzisa www.stylerave.com nangayiphi na indlela enokuthi iphazamisane nolunye usetyenziso lweqela kunye nokonwabela i-www.stylerave.com okanye nayiphi na inkonzo zayo. Awuyi kufumana okanye uzame ukufumana naziphi na izinto okanye ulwazi nangayiphi na indlela engenzi ngabom ukuba ifumaneke esidlangalaleni okanye ubonelelwe nge- www.stylerave.com.
Sinokuthi, amaxesha ngamaxesha, senze iinkonzo zemiyalezo, iinkonzo zencoko, iibhodi zemiyalezo, iibhodi zemiyalezo, iibhlog, ezinye iiforum kunye nezinye iinkonzo ezinjalo ezifumanekayo kwi- okanye www.stylerave.com. Ukongeza kuyo nayiphi na eminye imithetho okanye imigaqo esinokuthi siyithumele ngokunxulumene nenkonzo ethile, uyavuma ukuba awusoze ulayishe, uthumele, ugqithise, usasaze okanye kungenjalo upapashe kwi-www.stylerave.com okanye nayiphi na inkonzo okanye into eyenziweyo efumanekayo kwi okanye ngokusebenzisa www.stylerave.com, naziphi na izinto ezinokuthi (i) zithintele okanye zithintele nawuphi na omnye umsebenzisi ekusebenziseni nasekuzonwabiseni www.stylerave.com okanye iinkonzo zewebhusayithi, (ii) zinobuqhetseba, azikho semthethweni, zisongela, zixhaphaza, ziyaxhaphaza, ziyahlekisa , i-amanyala, amanyala, ukhubekisayo, iphonografi, ihlazo, isini okanye isenzo esonyanyekayo, ) phula, ucekisa okanye ukophula amalungelo abantu besithathu kubandakanya, ngaphandle kwemida, ilungelo lokushicilela, uphawu lokuthengisa, imfihlo yokuthengisa izinto eziyimfihlo, ikhontrakthi, ilungelo lobunini, amalungelo abucala okanye oluntu okanye naliphi na elinye ilungelo elinelungelo lobunini, (v) fumana into eyintsholongwane, i-spyware, okanye enye into enobungozi, (vi) iqulathe amakhonkco angenisiweyo, intengiso, oonobumba, okanye oonobumba beepiramidi balo naluphi na uhlobo, okanye (vii) ukubumba okanye ukuboniswa kwezibonakaliso zobuxoki okanye ezilahlekisayo zemvelaphi, ukuqinisekiswa okanye ingxelo yenyani. Uyavuma kwakhona ukuba ungalingisi omnye umntu okanye iqumrhu, nokuba lelokwenyani okanye liyinyani, kubandakanya nathi okanye abasebenzi. Nguwe wedwa onoxanduva lomxholo kunye neziphumo zayo nayiphi na imisebenzi yakho.
Ilungelo lokujonga kunye nolawulo loHlelo.
Sinelungelo, kodwa asinaso isibophelelo, sokujonga kunye / okanye ukujonga zonke izixhobo ezithunyelwe kwi-www.stylerave.com okanye ngeenkonzo zewebhusayithi okanye iimpawu zabasebenzisi, kwaye thina asiloxanduva lwazo naziphi na izinto ezinjengeposi ezisetyenziswa ngabasebenzisi. Nangona kunjalo, sinelungelo ngalo lonke ixesha ukubhengeza naluphi na ulwazi oluyimfuneko ukwanelisa nawuphi na umthetho, umgaqo okanye isicelo sikarhulumente, okanye ukuhlela, ukwala ukuthumela okanye ukususa naluphi na ulwazi okanye izixhobo, ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye, Ukuqonda kuyaphikiswa okanye kuyaphula le Migaqo yokusebenzisa, imigaqo-nkqubo yethu okanye umthetho osebenzayo. Sisenokubeka umda kwizinto ezithile zeeforum okanye sikunqumamise ukufikelela kwakho kwinxalenye okanye zonke iiforamu ngaphandle kwesaziso okanye isohlwayo ukuba sikholelwa ukuba waphula izikhokelo ezichazwe kulo mhlathi, imigaqo yethu kunye neemeko okanye umthetho osebenzayo, okanye nasiphi na esinye isizathu ngaphandle kwesaziso okanye uxanduva.
Ulwazi lwaBucala okanye olubuthathaka kwiiForamu zoLuntu.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba izimvo ezingeniswe kwiforum zinokurekhodwa kwaye zigcinwe kwiindawo ezininzi, kwiWebhusayithi yethu nakwezinye iindawo kwi-Intanethi, ekunokwenzeka ukuba zifikeleleke ixesha elide kwaye awunamandla okulawula ukuba ngubani oza kufunda ekugqibeleni. Kubalulekile ke ukuba unonophele kwaye uzikhethele iinkcukacha zakho ozichazayo wena nabanye, kwaye ngakumbi, akufuneki ukuba ubhengeze ulwazi olunobuthathaka, iintloni, zobunini okanye oluyimfihlo kwizimvo zakho kwiiforamu zethu zoluntu.
I-Sitrarave.com inokuba yindawo enxibelelana nezinye iisayithi ezingagcinwanga, okanye ezinxulumene nayo, iRave Rave ngomngcipheko wakho. Amakhonkco e-Hyper kwiindawo ezinjalo anikezelwa njengenkonzo kubasebenzisi kwaye akaxhaswa okanye anxulumene nale ndawo okanye iRave Rave. Uhlobo I-Rave ayinoxanduva lomxholo wezo sayithi kwaye ayizixhasi. Amakhonkco eehyper anokufikelelwa emngciphekweni womsebenzisi, kwaye isitayile iRave ayenzi mifanekiso okanye iwaranti malunga nomxholo okanye ukuchaneka kwezi zinto zi-hyper-link okanye iisayithi zomntu wesithathu ezinxulunyaniswa ne-: www.stylerave.com.
Ii-Odolo zeMveliso kunye neeNkonzo.
Sinokwenza iimveliso ezithile ukuba zikho kubandwendweli kunye nababhalisi be-www.stylerave.com. Ukuba u-odola kukho naziphi na iimveliso, kufuneka ume kwaye uqinisekise ukuba uneminyaka eli-18 ubudala okanye ngaphezulu. Uyavuma ukuhlawula amaxabiso apheleleyo ngalo naluphi na ulwaziso olwenzileyo ngekhadi letyala / letyala kanye nge-odolo yakho kwi-intanethi okanye ngenye indlela yokuhlawula eyamkelekileyo kuthi. Uyavuma ukuhlawula zonke iirhafu ezifanelekileyo. Ukuba intlawulo ayifumaneki kuthi evela kwikhredithi yakho okanye umnikisi wekhadi lebhanki okanye iiarhente zayo, uyavuma ukuhlawula zonke izixa ekufuneka zenziwe kuthi. Ezinye iimveliso ozithengayo kunye / okanye okhuphele kuzo okanye ungene kwi-www.stylerave.com inokuba phantsi kwemibandela eyongezelelekileyo kunye neemeko eziboniswe kuwe ngexesha lokuthenga okanye ukhuphelo.
Indawo yeWebhu yesithathu.
Unganakho ukudibanisa kwiwebhusayithi ethi: www.stylerave.com ukuya kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kwaye iisayithi zeqela lesithathu linokunxibelelana ne-: Uyavuma kwaye uyavuma ukuba asinoxanduva lolwazi, umxholo, iimveliso, iinkonzo, intengiso, ikhowudi okanye ezinye izinto ezinokuthi okanye zingabonelelwa ziiNdawo eziDityanisiweyo, nokuba zingabanini okanye ziqhutywa ziimanyano zethu. Unxibelelwano kwiiSayithi eziDityanisiweyo aluthethi ukuxhaswa okanye ukuxhaswa sithi kwezi webhusayithi okanye ulwazi, umxholo, iimveliso, iinkonzo, intengiso, ikhowudi okanye ezinye izinto eziboniswe kwiiwebhusayithi. Ukufakwa kwalo naliphi na ikhonkco kwiindawo ezinjalo kwiSayithi yethu akuthethi ukuxhaswa, ukuxhaswa, okanye ukucebiswa kwendawo. Isitayile Rave sibhengeza naluphi na uxanduva lokudityaniswa (1) kwenye iwebhusayithi kwiWebhu leWebhu kunye (2) kwenye iwebhusayithi kwiWebhusayithi. Isitayile Rave asinakuqinisekisa imigangatho yayo nayiphi na iwebhusayithi ekunikezwe kuyo amakhonkco kule Webhusayithi kwaye asiyi kuba noxanduva lokuqulathwe zezi siza, okanye naziphi na amakhonkco alandelayo. Asimeleli okanye sigunyazise ukuba iziqulatho zalo naliphi na iwebhusayithi yewebhu zichanekile, zihambelana nomthetho wombuso okanye womanyano, okanye zihambelana nelungelo lokushicilela okanye eminye imithetho yempahla. Kwakhona, asiloxanduva lwethu okanye naluphi na uhlobo lokuhambisa olufunyenwe kuyo nayiphi na iwebhusayithi enxibeleleneyo. Nakuphi na ukuthembela kwimixholo yewebhu yesithathu yenziwa ngomngcipheko wakho kwaye ucinga ukuba lonke uxanduva kunye nemiphumo ibangelwa kukuxhomekeka.
IiKhonkco zeVidiyo eziNgenisiweyo.
Amanye amaphepha e-www.stylerave.com abonelela ngokusetyenzwa kuwe ukuze “ubethelele” iividiyo ezifumaneka kwiphepha lezinye iisayithi okanye amaphepha eblogi (kunye noMdlali, njengoko kuchaziwe apha, "Ividiyo encinci"). Ukusebenza kubonelelwa ngokukunika ikhowudi eyimfuneko ye-HTML ukuze ubandakanye nakwelo phepha ukuze wenze ukuba iVidiyo ethunyelweyo ivele. Ukuba ubandakanya i-HTML kwiwebhu okanye iphepha le-blog, eyona vidiyo isasazwayo yeVidiyo efakwe kwi-Intanethi iya kuhanjiswa kwiiseva zethu kodwa iVidiyo Encanyiweyo inokunikwa undwendwe lwelo phepha njengenxalenye yelo phepha. Ukuba ukhetha ukushumeka ividiyo kwiphepha, uyavuma ngolu hlobo lulandelayo: (i) awuyi kutshintsha, nangayiphi na indlela, ividiyo ebethelelwe (kubandakanya ngaphandle komda umxholo, ifomathi, kunye nobude kunye nentengiso ehambelana nayo) isetyenziselwe amaseva ethu; (ii) awuyi kuqhuba ufikelele kwiVidiyo eNgenisiweyo kuyo nayiphi na ividiyo yevidiyo okanye nasiphina isixhobo ngaphandle kwesidlali sevidiyo esinikezwe kuthi xa iVidiyo ethunyelweyo (uMdlali "); (iii) IVidiyo efakelweyo isenokusetyenziswa njengenxalenye yeenjongo zorhwebo, kubandakanywa kwiphepha elixhaswe yintengiso, ukuba: (a) Ividiyo efakiweyo ayiyi kubandakanywa, okanye isetyenziswe njengenxalenye yenkonzo ethengisa ukufikelela kuyo umxholo wevidiyo; (b) awusayi kufaka intengiso, ukuxhasa, okanye imiyalezo yokuzihlaziya, okanye ikufuphi, kwiVidiyo encinci okanye uMdlali; kwaye (c) ukuya kuthi ga xa uthengisa nakuphi na ukuthengisa, ukuxhasa ngemali okanye isixhobo sokunyusa ukuze sivele kwakwiphepha elinye elibandakanya iVidiyo Encanyiweyo, iphepha libandakanya okunye okungasinikwanga sisiseko esaneleyo sokuthengisa. Awungekhe uthintele, uthintele, wakhele okanye ukhubaze nayiphi na inxalenye yoMdlali, kubandakanya ngaphandle kokunxibelelana nomda kwindawo yethu. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba zonke iimetrikhi ezilinganisiweyo ezinxulumene nokufikelela kunye nokujonga iVidiyo ethunyelweyo iya kufakwa kwiwebhusayithi ethi: www.stylerave.com Ngaphandle kokuthintelwa kokunikezelwa kwale migaqo yokusetyenziswa, asiyi kuba naxanduva kuwe ngenxa yaso nasiphi na isizathu ekusebenziseni kwakho iVidiyo efakwe kwi-Intanethi kwaye uyavuma ukusikhusela, usikhusele kwaye usibambe thina kunye nabo sibahlangene nabaphathi bethu, amagosa, abasebenzi kunye neearhente ezingenabungozi nakuzo zonke izimangalo, amatyala, iindleko neenkcitho, kubandakanya imirhumo yamagqwetha. nayiphi na indlela esuka ekusebenziseni kwakho ividiyo encinci.
Siyawahlonipha amalungelo obunini bendawo yabanye abantu, kwaye sifuna ukuba abantu abasebenzisa i-wstylerave.com, okanye iinkonzo okanye izinto ezenziwa zifumaneke kwi- /stylerave.com, benze okufanayo. Ukuba uyakholelwa ekubeni umsebenzi wakho ukope ngendlela yokwephulwa kwamalungelo okushicilela, nceda ugqithisele olu lwazi kulandelayo kwiAjenti yethu yelungelo lokushicilela, etyunjelwe ukulandela umthetho we-Millenium Copyright Act, 17 i-USC § 512 (c) (2), ebizwa ngezantsi:
a. Idilesi yakho, inombolo yomnxeba, kunye nedilesi ye-imeyile;
b. Inkcazo yomsebenzi obunelungelo lokushicilela owabango ukuba waphule umthetho;
c. Inkcazo apho ikhoyo into yokophula umthetho.
d. Isiteyitimenti sakho sokuba unokholo oluqinisekileyo lokuba ukusetyenziswa okuphikisanayo akugunyazwanga ngumnini welungelo lokushicilela, umthengisi wakhe, okanye umthetho;
e. Ukutyikitywa kwe-elektroniki okanye ngokomzimba komntu ogunyaziswe ukuba enze egameni lomnini welungelo lokushicilela; kwaye
f. Isiteyitimenti esenziwe nguwe phantsi kwesigwebo sobugebenga, ukuba olu lwazi lungentla kwisaziso sakho lichanekile nokuba ungumnini welungelo lokushicilela okanye ugunyazisiwe ukuba wenze egameni lomnini welungelo lokushicilela.
IZAZISO ZE-COPYRIGHT KUPHELA
Ummeli welungelo lokushicilela:
Uhlobo Rave. I-imeyile: Umxholo@www.stylerave.com
I-Sitrarave.com, kubandakanya, ngaphandle komda, zonke iinkonzo, amanqaku, umxholo, imisebenzi kunye nezinto ezinikezelweyo www.stylerave.com, zinikezwe "njengoko zinjalo," "njengoko zikho," ngaphandle kwesiqinisekiso salo naluphi na uhlobo, nokuba kuyabonakala okanye kucacisiwe, kubandakanya, ngaphandle komda, nayiphi na iwaranti yolwazi, idatha, iinkonzo zedatha, ixesha elongezelelweyo okanye ukufikelela ngaphandle kokuphazamiseka, nayiphi na iwaranti malunga nokufumaneka, ukudlala, ukuchaneka, ukuchaneka, ukuchaneka, ukugqibelela, ukusebenziseka, okanye umxholo wolwazi, kunye naziphi na iziqinisekiso isihloko, ukungaphulwa kolwaphulo-mthetho, ukurhweba okanye ukulunga kwenjongo ethile, kwaye ngokwenjenje siyayekisa nayiphi na into nazo zonke iziqinisekiso ezinjalo, sivakalisa kwaye sibhekisiwe. Asikugunyazisi ukuba i-www.stylerave.com okanye iinkonzo, umxholo, imisebenzi okanye izinto ezibonelelwe nge-www.stylerave.com ziyakubakho ngexesha elifanelekileyo, ezikhuselekileyo, ezingaphazanyiswanga okanye iimpazamo ezingenasiphoso, okanye ukuba iziphene ziya kulungiswa. Asenzi siqinisekiso sokuba www.stylerave.com okanye iinkonzo ezibonelelweyo ziya kuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi. Akukho ngcebiso, ziphumo okanye lwazi, nokuba lubhalwa ngomlomo okanye lubhaliwe, olufunyenwe nguwe okanye ufumaneka www.stylerave.com luya kwenza nayiphi na iwaranti engenakwenziwa ngokucacileyo apha. Thina kunye namahlakani ethu kananjalo asithwali xanduva, kwaye asizukubekwa tyala, nakuphi na ukonakala, okanye intsholongwane enokuthi yosulele, izixhobo zakho ngenxa yokufikelela kwakho, ukusebenzisa, okanye ukukhangela ku: www.stylerave.com okanye ukhuphelo lwakho Nasiphi na isixhobo, idatha, isicatshulwa, imifanekiso, imixholo yevidiyo, okanye imixholo yeaudio evela ku-www.stylerave.com. Ukuba awonelisekanga yi-www.stylerave.com, olona nyango lwakho kukuyeka ukusebenzisa u-www.stylerave.com.
Sizama ukuqinisekisa ukuba ulwazi oluthumele kwi-www.stylerave.com ichanekile kwaye ihlaziyiwe. Sinelungelo lokutshintsha okanye ukwenza izilungiso kulo naluphi na ulwazi olunikezwe ku www.stylerave.com ngalo naliphi na ixesha nangaphandle kwesilumkiso. Asikhuthazi kwaye asinoxanduva lokuchaneka okanye ukuthembeka kwalo naluphi na uluvo, ingcebiso okanye ingxelo kwiwebhusayithi ethi: ngelixa besenza imisebenzi yabo esemthethweni (kubandakanya, ngaphandle kwemida, abanye abasebenzisi be-www.stylerave.com). Kuluxanduva lwakho ukuphonononga ukuchaneka, ukugqibelela okanye ukusebenziseka kwalo naluphi na ulwazi, uluvo, ingcebiso okanye enye into ekhoyo kwi-www.stylerave.com. Nceda ufune iingcebiso zeengcali, ngokufanelekileyo, ngokubhekisele kuvavanyo lwalo naluphi na ulwazi oluthile, umbono, ingcebiso okanye nawuphi na umxholo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimali, impilo, okanye ulwazi ngendlela yokuphila, umbono, iingcebiso okanye omnye umxholo.
Ngaphandle kokuthintelwa koku kungasentla kweli candelo, thina kunye namahlakani ethu, abathengisi kunye nabanikezeli beelayisensi asenzi zivumelwano okanye ziphi na izimvo ngokubhekisele kuyo nayiphi na imveliso okanye iinkonzo ezi-odolwe okanye ezibonelelwe nge: www.stylerave.com. kunye nezimvo ezenziwe kwimveliso okanye kwiinkonzo zoncwadi, ebuzwa rhoqo amaxwebhu emibuzo kwaye kungenjalo ku: www.stylerave.com okanye ngembalelwano nathi okanye iiarhente zethu Zonke iimveliso kunye neenkonzo ezi-odolwe okanye ezibonelelwe ngewebhusayithi www.stylerave.com zibonelelwa kuthi "njengoko zinjalo", ngaphandle kokuba, ukuba konke, kungenjalo kuchazwe kwilayisenisi okanye isivumelwano sentengiso esingeniswe sodwa ngokubhala phakathi kwethu kunye nathi okanye ilayisenisi yethu okanye umnikezeli.
Akukho mcimbi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho ekungakhathaleni, thina, amahlakani ethu, okanye nabaphi na abalawuli bethu, amagosa, abasebenzi, iiarhente okanye umxholo okanye ababoneleli beenkonzo (bebonke, "amaziko akhuselweyo") anoxanduva lokuya ngqo, ngokungathanga ngqo, ukhethekileyo, isigulo, isiphumo, umzekelo okanye ngumonakaliso weso monakalo ovela, okanye ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, ngokusetyenziswa, okanye ukungakwazi ukusebenzisa, www.stylerave.com okanye umxholo, iimpawu, izixhobo nemisebenzi enxulumene noko, ukubonelelwa kwakho ulwazi nge: www.stylerave.com, ishishini elahlekileyo okanye ukuthengiswa okulahlekileyo, nokuba iqabane elikhuselweyo licetyisiwe malunga nomonakalo onjalo. Akuyi kubakho kwimeko apho amaziko akhuselweyo aya kuba noxanduva lokunxibelelana okanye nayiphi na into ethunyelwe, idluliselwe, itshintshwe okanye ifunyanwe okanye egameni lakhe nawuphi na umsebenzisi okanye omnye umntu ku- Akuyi kubakho kwimeko iya kuba lixanduva elipheleleyo lokudityaniswa kwezinto ezikhuselweyo kuwe kuwo wonke umonakalo, ilahleko, kunye nezizathu zokwenza (nokuba kukwisivumelwano okanye ukuhlukunyezwa, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ukungahoyi okanye enye into) evela kwimigaqo nemiqathango okanye Ukusetyenzwa kwewebhusayithi www.stylerave.com kudlula, kuqokelele inani, ukuba likho, lihlawulwe nguwe kuthi ngokusebenzisa kwakho www.stylerave.com okanye ukuthengiswa kweemveliso ngendlela www.stylerave.com.
Ipesenti encinci kakhulu yabantu inokufumana ukubanjwa xa ichazwe kwimifanekiso ethile ebonakalayo, ezinje ngezibane ezidanyazayo okanye iipateni ezinokuvela kwimidlalo yevidiyo okanye ezinye izinto ze-elektroniki okanye ze-Intanethi. Nokuba abantu abanembali yokuxhuzula okanye isifo sokuwa banokuba nemeko engafumanekiyo enokubangela “ukubanjwa kweefoto zomzimba” ngelixa ubukele imidlalo yevidiyo okanye ezinye izinto ze-elektroniki. Olu xinzelelo luneempawu ezahlukileyo, ezibandakanya ukuthambeka ngamehlo, ukudideka, ukudideka, ukuphulukana okomzuzwana, ukujongana ngamehlo okanye ubuso, ukutshintsha umbono okanye ukujija okanye ukungcangcazela kwengalo okanye imilenze. Ukuba ufumana naziphi na ezi mpawu zingaphambili, okanye ukuba ngaba wena okanye usapho lwakho unembali yokuxhuzula okanye isifo sokuwa, uya kuyeka ngoko nangoko ukusebenzisa i-www.stylerave.com kwaye udibane nodokotela.
Silawula kwaye sisebenza www.stylerave.com kwiiofisi zethu eMelika. Asimeli ukuba izixhobo ezikwiwebhusayithi ethi www.stylerave.com zilungile okanye ziyafumaneka kwezinye indawo. Abantu abakhetha ukungena ku-www.stylerave.com kwezinye iindawo bakwenza oko ngokwabo, kwaye banoxanduva lokuthobela imithetho yendawo, ukuba kusetyenziswe imithetho yasekhaya. Onke amaqela kule migaqo nemiqathango ahlutha amalungelo awo okuxoxwa kwetyala ngokugwetywa.
Sinokuphelisa, sitshintshe, sinqumamise okanye siyeke nayiphi na icandelo le www.stylerave.com okanye iinkonzo zewebhusayithi nangaliphi na ixesha. Singakuthintela, sinqumamise okanye sinqumamise ukufikelela kwakho kwiwebhusayithi ethi www.stylerave.com kunye / okanye iinkonzo zayo ukuba sikholelwa ukuba wophula imiqathango yethu kunye neemeko okanye umthetho osebenzayo, okanye nasiphi na esinye isizathu ngaphandle kwesaziso okanye uxanduva. Sigcina umgaqo-nkqubo obonelela ngokupheliswa kweemeko ezifanelekileyo www.stylerave.com sisebenzise amalungelo abasebenzisi abaphindayo ukuphula umthetho wamalungelo obunini bemveliso.
Utshintsho kwiMigaqo yokuSetyenziswa.
Uhlobo Rave lugcina ilungelo, ngokubona kwethu, ukutshintsha, ukuguqula, ukongeza okanye ukususa nayiphi na icandelo leMigaqo neMiqathango, iyonke okanye ngokuyinxalenye, nangaliphi na ixesha. Utshintsho kwiMigaqo nakwiMeko ziya kusebenza xa zithunyelwe. Ukuqhubeka kokusebenzisa kwakho i-www.stylerave.com kunye / okanye iinkonzo ezenziwe zafumaneka kwiwebhusayithi ethi www.stylerave.com emva kokuba naluphi na utshintsho kwiMigaqo nakwiiMeko zithunyelwe kuyakuqwalaselwa ukwamkelwa kolo tshintsho.
Imigaqo kunye neMiqathango, kunye nobudlelwane phakathi kwakho nathi, ziya kulawulwa yimithetho yeLizwe laseNew York, eUnited States yaseMelika. Uyavuma ukuba naliphi na unobangela lesenzo onokuthi uqhamuke phantsi kweMiqathango neMibandela liya kuqaliswa kwaye liviwe kwinkundla efanelekileyo kwi-Nkundla yaseNew York, kwi-County yaseNassau, e-United States yaseMelika. Uyavuma ukunikezela kulawulo lobuqu kunye nolawulo olukhethekileyo lweenkundla ezimi kwiNassau County kwiLizwe laseNew York. Ukusilela kwethu ekusebenziseni okanye ukunyanzelisa naliphi na ilungelo okanye ukubonelelwa kweMiqathango neMiqathango akuyi kulawula ulungelo okanye ulungiselelo. Ukuba naluphi na ulungiselelo lweMigaqo neMiqathango ifunyenwe yinkundla yolawulo olululo ukuba alusebenzi, amaqela nangona kunjalo ayavuma ukuba inkundla kufanele ukuba izame ukwenza iinjongo zeqela njengoko kubonisiwe kulungiselelo, kunye nolunye ulungiselelo lweMigaqo. kwaye iimeko zihlala zisebenza ngokugqibeleleyo kunye nefuthe.